ekugcineni ifayibha! – Offer t.o.m. 31/3! | Holmbygden.se
posted on 14 EyoKwindla, 2017 yi Holmbygden.se
Ngoku ekugqibeleni ixesha ukudibanisa kwisithili Holm nge ifayibha broadband. Ezi ntsuku Holm amalungu Imisonto bafumana woyibingelela iibhokisi zeposi apho de 31 March bajoyine ngexabiso ngesaphulelo of 18 400 kr (1500 kr zithathelwe amagama. kakhulu 19 900 kr). Kwanabo abangafuniyo ukusebenzisa iinkonzo namhlanje, qhagamshela indlu iimfuno elizayo!
umsebenzi onzima Okthoba 2013
Emva malunga 3,5 Iminyaka yomsebenzi onzima yi Holm Imisonto bakhwele namalungu abadlali, iintlanganiso, izicelo M.M.. njengokuba kunjalo ngoku kucacile ukuba kukho ServaNet oya ukutsala inetha Holm. ServaNet kwakhona nkampani eza kwenza uthungelwano fibre-optic zaseDolophini evela Sundsvall, nto leyo ithetha ukuba abantu abaninzi baza kuba nako ukujoyina ukususela ngaphandle Holm Imisonto emvula.
Okubandakanyiweyo ngokumba endlwini lwesithembiso
Kumanqanaba ngaphambili, kuye kubekho intetho ye-compound ngokwayo kufuneka amalungiselelo ukuze ube yindawo yokungcwabela intambo e Holm yaye wena mhlawumbi kuma ngokwayo zimba bit yayo yokugqibela ukuya kufikelela eludongeni lwendlu. Umnikelo namhlanje, nangona kunjalo, kuquka zombini imingxuma yonke indlela, nokwenza imingxuma eludongeni. Asazi namhlanje ukuba ufuna okanye udinga iinkonzo ze-network, unako nako ukulinda ne isikhokhelo. Ngale ndlela, loo ndlu lonxulumano kwi network, nto leyo iphakamisa amaxabiso ipropati ngaphezulu kakhulu kunokuba iindleko cut. Le shedyuli ukubeka nefolokhwe emhlabeni kwiinyanga ezintathu, ngoJuni.
Umbutho iyaqhubeka Kakade esweni inkqubo yomzobo ifayibha namhlanje, nangona ServaNet uthethe isicelo isabelo nxamnye kwiBhodi County. Noko ke, ngoku ukuba umntu ngamnye ukuba akhethe ukuba babe ifayibha okanye. Ngako oko ke akukho sigqibo umbutho eqhelekileyo kule. Yiyiphi indima Holm Imisonto ke ngoko kuya kufuneka ukususela ngoku kuya kuthiwa thaca kwaye kuxoxwe ngazo kwintlanganiso yonyaka entlakohlaza kade yaye ekugqibeleni ndagqiba ngamalungu. Funda apha ngakumbi Holm ifayibha kunye namanqaku zangaphambili.
ibhokisi ulwazi for ServaNet isithembiso
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi malunga uluhlu lweenkonzo, yokubala umzekelo, nemibandela M.M.. ingafunyanwa kwi iposi.
Nje kuphela ifayibha
Kufuna enye uphuhliso lwasemaphandleni ukwanda lwebhendi ebanzi in Holm nje kuphela into ngokwayo – i Internet fast, Iinkonzo TV kunye zeefoni IP. Ukuphuhlisa isithili zidibene ukudala iimeko ezisisiseko elizayo. Ukuze ayilungise imfuneko kuba uhambo Holm Imisonto kwiBhodi allra första facebookinlägg citeras; “Sifuna ukuba bammise umsebenzi kwinkqubela ukuze kuqinisekiswe ukuba kwilizwe lethu ukufikelela kwinethiwekhi broadband kakhulu kwilizwe lethu ukuba aqhubeke ephila nokuphuhlisa kwixesha elizayo. Makhe ukunika abantwana bethu nabazukulwana kunye nabanye ithuba lokuphila kwilizwe lethu elihle.”